एजेन्सी, ३० असार । नेपालसँग सीमा जोडिएको विहारमा फेरि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । विहार सरकारले १६ जुलाई देखि लागु हुने गरी पूर्ण लकडाउनको घोषणा
११६ जना कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संक्रमित १७ हजार ६१
काठमाडौं, ३० असार । देशमा आज ११६ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमित संख्या १७ हजार ६१ सय पुगेको छ ।
समाचार थप समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण
काठमाडौँ, ३० असार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आज चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित
कैदीको चिन्तनमा सुधार ल्याउन शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श आवश्यक छ: गृहमन्त्री थापा
आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिदैं जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्न ओलीलाई वामदेवको सुझाव
बामदेवद्वारा अयोध्याबारे मन्तव्य फिर्ता लिदै जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्न ओलीलाई सुझाव
काठमाडौं, ३० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमा पर्छ भनी हिजो बालुवाटारमा बोलेपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आइरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले मुख फोरेका छन् । उनले आज प्रेस नोटफमार्फत् विना तथ्य प्रमाण यो विषयमा नबोल्न सल्लाह पनि दिएको खुलासा गर्दै ओलीले दिएको मन्तव्य फिर्ता लिदै जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्न भनेका छन् ।
दीपाश्री निरौलाका पक्षमा सात संस्थाले निकाले संयुक्त वक्तव्य, यस्तो चेतावनी दिए
ओलीले 'अयोध्या नेपालमा' भनेपछि उनका समर्थकहरुले लोकमणि पौडेलको आलेख सामाजिक सञ्जालमा छर्न थाले
अयोध्या नेपालमा भनेपछि बाबुरामको ओलीलाई व्यङ्ग्य- आधी-कवि ओलीकृत कलीयुगीन नयाँ रामायण
गृह र प्रहरीको टकराव सतहमा, नयाँ आइजीपी थापाको चुनौती
प्रधानमन्त्री आलीको अभिव्यक्तिप्रति दिल्लीस्थित नेपाल दूतावास अगाडी नेपालीद्वारा प्रदर्शन
विशेष थप समाचार
काठमाडौ, ३० असार । नेपालमा आज ११६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । आज संक्रमितको सख्या १७ हजार ६१ जना पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज ११६ जना संक्रमित थपिएको छ ।
अर्थ/कर्पोरेट थप समाचार
काठमाडौँ, ३० असार : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ५.०४ अङ्कले उकालो लागेर एक हजार ३४७.४४ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.९५ ले वृद्धि भई २४८.१८ मा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कुल १८६ कम्पनीका २५ लाख ६८
सुनको प्रतितोला एक सयले घट्यो
लघु जलविद्युत् आयोजना जीर्ण अवस्थामा, उपभोक्ता प्रभावित
नेटवर्किङ धन्दामा पूर्वएआईजी
एक सय १६ सङ्क्रमित थपिए (कहाँ कति संक्रमित), ३४ जना डिस्चार्ज
पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही कोरोना संक्रमित
अन्तर्वार्ता थप समाचार
भारतले कहाँ खडा गरेको रहेछ अयोध्या ? प्रधानमन्त्रीले प्रमाण ल्याउनुहोला नि- डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
काठमाडौं, ३० असार । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न गरेका छन् । ओली भारतलाई गाली गर्नमै मात्र केन्द्रित
पौडेलको ओलीलाई प्रश्न-भारतसँग वार्ता गर्ने भन्ने अनि बिथोल्ने गरी निहुँ खोज्दै हिंड्ने ?
काठमाडौं, ३० असार । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जथाभावी बोल्दै हिंडेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले गफ गरेर
‘केपी ओली अबको प्रधानमन्त्री’ भनेर जनतासँग भोट मागिएको बिर्सन मिल्दैन- ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २९ असार । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कसैको कर्मी कमजोरी देख्देवित्तिकै राजीनामा माग्नु सही नभएको तर्क गरेका छन् । उनले चुनावमा केपी शर्मा
मनोरञ्जन थप समाचार
सुशान्तको यादमा अंकिताले जलाइन् दियो
इरफान खानकी पत्नीले लेखिन् ‘रात भर तिम्रो याद
दीपाश्री निरौलाका पक्षमा सात संस्थाले निकाले संयुक्त वक्तव्य,
विवेक ओबेरायले बच्चन परिवारको लागि गरे प्राथना
खेलकुद थप समाचार
म्यानचेस्टर सिटीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने
एजेन्सी, २९ असार । इंग्लिस फुटबल क्लब म्यानचेस्टर सिटीमाथि दुई वर्ष युरोपियन क्लब प्रतिष्पर्धा खेल्न नपाउने गरी लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ । यसअघि उसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णय पुनरावलोकनका लागि भएको निवेदनमाथि आज द कोर्ट अफ आरबिटेसन फर स्पोर्ट (कास) ले फकुवाको फैसला सुनाएको हो । यसअघि युएफाले फेब्रुअरीमा सिटीले सन् २०१२ देखि २०१६ बीच […]
डेभिड बेकहमका छोरा ब्रुकलिनले गर्लफ्रन्ड निकोल पेल्टजसंग विवाह गर्ने(फोटोफिचर)
एजेन्सी, २९ असार । कोरोनाको महामारीबीच फूटबल जगतका स्टार डेभिड बेकहमका छोरा ब्रुकलिन बेकहमले हलिउडमा कार्यरत २५ वर्षीया नायिका निकोल पेल्टजसंग विवाह गर्ने भएका छन् । उनले आफ्नो विवाह गर्ने योजना इन्टाग्राममार्फत जानकारी गराएका हुन् । निकोललाई ब्रुकलिनले विवाहको प्रस्ताव रखेका थिए । जसलाई निकोलले स्विकार गरेकी थिइन् । निकालेले ट्रन्सफर्मर, एज अफ एक्सटिङसन, ब्याक […]
इपिएल फुटबलः सनको सानदार प्रदर्शन देखि रेलिगेसनबा जोगिने भिल्ला र बर्नमाउथको आशा पलायो
एजेन्सी, २९ असार । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गएराति महत्वपूर्ण खेलहरु भए । टोटनहामले आर्सनलमाथि महत्वपूर्ण जित हासिल गर्यो । टोटनहामको जितमा दक्षिण कोरियाली स्टार सन हुङ मिन नायक बने । उनले बराबरी गोल गरेका थिए भने जितका लागि टोबी अल्डरबेरलडले गरेको गोलमा कर्नर प्रहार गरेका थिए । २-१ को जितसँगै टोटनहामको युरोपा लिग खेल्ने […]
वेस्ट इन्डिजले जित्यो कोरोना पछिको पहिलो टेस्ट
लन्डन, २९ असार । कोरोना भाइरसको दौरान फर्केको क्रिकेटअन्तर्गत इंग्ल्यान्डविरुद्धको पहिलो टेस्ट वेस्ट इन्डिजले आइतबार जित हात पारेको छ । वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्यान्डकै घरेलु मैदानमा इंग्लिस टिमलाई ४ विकेटले हराएको हो । घरेलु टोलीले २ सय रनको लक्ष्य दिएको हो । जसमा वेस्ट इन्डिजलाई जित दिलाउन जेर्मेन ब्ल्याकवुडले सानदार ९५ रन बनाए । उनी बेन […]
बार्सिलोनाद्वारा भालाडोलिड पराजित, उपाधिको लागि दबाब कायमै
काठमाडौं, २८ असार । स्पेनिस लिग फुटबल ला लिगामा बार्सिलोना विजयी भएको छ । गएरातिको खेलमा रियाल भालाडोलिडलाई १–० ले हराउँदै बार्सिलोनाले तालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको रियाल मड्रिडसँग एक अंकको दुरी बनाएको हो । बार्सिलोनाको जितमा अर्टुरो भिडालले निर्णायक गोल गरे । जितसँगै बार्सिलोनाले ३६ खेलमा ७९ अंक जोडेको छ । एक खेल कम खेलेको […]
संसद हलमा चिम्पान्जीको पेन्टिङ ८६ करोडमा बिक्रि
कुकुरले चलाएको बन्दुकले मालिक्नीलाई गोली लागेपछि…
लुभुकी कोरोना संक्रमित ल्याब टेक्निसियनलाई आत्मबल दह्रो बनाउन आग्रह
नेपालक‍ो कर्मचारी प्रशासन : सिद्धान्त र व्यवहार
थला परेको पर्यटन क्षेत्र भन्छ-“पचास प्रतिशत क्षमतमा भए पनि सेवा सुरु गरौँ”
अमेरिकाले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ह्याकिंग साम्राज्य चलाइरहेको चीनको आरोप
उत्तरपूर्वी टर्कीमा बाढी: दुईको मृत्यु, ११ घाइते
अमेरिकामा विवादास्पद संघीय मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन पुनः १७ वर्षपछि ब्यूँताइयो
जनता जान्न चाहन्छन थप समाचार
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष गोपाल किराँतीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपयोगिता सकिएको बताएका छन् । उनले सत्तारुढ नेकपा नफुट्नेसमेत दाबी गरेका छन् । सोमबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण
ईश्वर पोखरेलको प्रश्न : प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले छोड भन्नेमा के लजिक छ ?
केपी ओलीकै कारण उनको कुर्सी संकटमा परेको खतिवडाको दाबी (भिडिओसहित)
केपी ओलीको कुर्सी हामीले बचाईदिनुपर्छ ? भन्दै जंगिए रमेश पौडेल (भिडिओसहित)
लाज लाग्दैन् ? भन्दै नेकपाका नेताहरुमाथि गर्जिए डा. मिनेन्द्र रिजाल (भिडिओसहित)
आज भानु जयन्ती
जिन्दगी : केवल एउटा सास फेरिरहने मुर्दा
सुदूरपश्चिममा चार हजार कोरोना सङ्क्रमित
फेरिएको परिभाषा (कबिता)
सूचना प्रविधि थप समाचार
लकडाउनले नास्टका कार्यक्रम प्रभावित
थप एक साता उद्धार उडान
होटल मजदूरले चैतदेखिको तलब पाउने
आज उद्वार उडानको अन्तिम दिन
झरना अवलोकनमा पर्यटकलाई रोक
Reportersclub Nepal Tv
शिक्षा थप समाचार
११ वर्षीया मनिषालाई जापानमा अन्तराष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार
होम सेन्टरबाटै विश्वविद्यालय परीक्षा दिन सकिने
काठमाडौं, असार २९ । कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा सञ्चालनको गाँठो फुकाउन सरकारले होम सेन्टर कायम गरेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण समस्या भएपछि विकल्पका
अविरल वर्षाका कारण जलेश्वर कारागार डुबानमा
नेकपाको वर्तमान स्वरुप निर्माणमा थापाको योगदान अविस्मरणीय: मुख्यमन्त्री पौडेल
रेकर्ड तोड्दै अख्तियार प्रमुख
नेपालमा कम्युनिस्टहरु जनताबाट अस्वीकृत हुनेछन्- भाजपा प्रवक्ता डा. शास्त्री
रुखको हाँगाले लाग्दा मोटरसाइकल सवार युवकको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीको भनाइले धार्मिक सहिष्णुतामा खलल ल्याउन सक्छः जितेन्द्र सोनल
इतिहास थप समाचार
ओेली र मोदीले जनकपुर-अयोध्या-जनकपुर बस सेवा संयुक्त रुपमा
सुरक्षा थप समाचार
चितवनकी चेलीको अश्लिल भिडियो वेबसाइटमा, अपलोड गर्ने युवक पक्राउ
खेतमा बालिका बलात्कृत
सेती नदी उत्खनन गरेको अभियोगमा पक्राउ
फोटो फिचर थप
आज असार १५ मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन, खुमलटारमा धान रोपाई गरिँदै (फोटोफिचर)
काठमाडौं उपत्यकामा धान रोपाई समयमै सकियो (फोटोफिचर)
योग दिवसमा नायिका आश्का गरोडियाको आर्कषक योगासन (फोटोफिचर)
आज असार १५ मानो रोपेर मुरी
काठमाडौं उपत्यकामा धान रोपाई समयमै सकियो
योग दिवसमा नायिका आश्का गरोडियाको आर्कषक